Hanami - Dhaqan Jabaan ah Waa inaad Hal Noloshaada Ku Nooshahay | Safarka Absolut
Ma taqaan micnaha Hanami? Ma weydiinayno macnaha ereyga laftiisa, laakiin wax kasta oo ay astaan ​​u tahay. Hagaag, kahor intaadan ka fikirin, aan kuu sheego inaan u tagno Japan si aan wax yar uga fahanno dhaqankan quruxda badan ee lagu soo ururiyey hal eray.
Meesha ayaynu horay u haysanay sababtuna waa ubaxyadii. Marka geedaha cherry-ka ah si dhakhso ah ayey maskaxda ugu soo dhacaan. Haa, ubaxeed cherry waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, sidoo kale loo yaqaan Sakura marka geedka cherry waa ubax. Hagaag, waxay qayb ka yihiin Hanami, dhaqan kaas oo maanta aan soo bandhigi doono dhammaan sirtiisa.
1 Waa maxay hanami
2 Halkee bay dhaqan noocan ahi ka timaaddaa?
3 Goormaan arki karnaa showgan ubaxa ah
4 Meelo dhaqameed lagu xuso Hanami
Waa maxay hanami
Waxaan ku qeexi karnaa sida a dhaqanka japanese. Dabcan, waa mid ka mid ah kuwa loogu jecel yahay lana raaco. Tan iyo markii ay ka kooban tahay raaxeysiga iyo aragtida sida geedaha cherry-ku ubaxaan. Taasi waa, waa nooc dhaqan ah oo qof walba uu tago meelo cayiman si uu u arko quruxdeeda. Quruxdani waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah in ubaxeedii cherry-ga uu ifka yimid oo uu magaalada oo dhan ku daboolay gogol casaan ah. Xaqiiqdii waa wakhti qurux badan, midabaynta jidadka iyo jardiinooyinka macaan xad dhaaf ah. Marka waxay noqotay daqiiqad weyn.
Halkee bay dhaqan noocan ahi ka timaaddaa?
Waa in la yiraahdaa waxay soo jirtay sanado badan. Tan iyo markasta oo ubaxyada ay ka baxaan geedaha, daqiiqadaas waxay calaamad u noqon doontaa bilowga guga sida qof walba ogaa. Laakiin intaas oo keliya maahan laakiin sidoo kale waxay ahayd tilmaan muujinaysa in xilli abuurka bariiska. Marka lagu daro tilmaamida waqtiga gaarka ah sanad gudihiis, waa in la sheegaa in noocyada geedaha noocan ah loo arkay inay yihiin kuwo muqadas ah.
Maaddaama ay rumeysnaayeen in ilaahyadu ay ku dhex noolyihiin. Sidaa darteed, markii bilowgii goosashada la gaadhay oo ay ahayd ubax, waxaa loo tarjumay sidii ay ilaahyadu u fiirsanayeen si ay uga caawiyaan goosashada inay fiicnaato. Sidaa darteed, taariikhda diimeed ayaa la sheegaa inay tahay aasaaska koowaad ee dhaqanka hanami. Imaatinka guga laakiin sidoo kale soo degitaanka ilaahyada dhulka, qaab caawimaad ah.
Laakiin waa run oo tartiib tartiib ayuu u joojiyay qaadashada saldhiga diinta sidoo kale waxaa jira dad badan oo qaraabada la ah samurai. Taasi waa, matalaad awood u leh inuu dhinto isagoo weli ku jira da'da koowaad ee nolosha. Waxaa intaa dheer, waxaa jira halyeey sheegaya in markii ugu horreysay ubaxyadu ay caddaayeen, laakiin inyar yar oo ka mid ah waxay ku wasakheeyeen dhiigga dagaalyahannada oo waxay qaateen midab casaan ah oo aan garanayno.
Goormaan arki karnaa showgan ubaxa ah
Waxaa la sheegay in mar hore dhammaadkii Febraayo ubaxyadii ugu horreeyay ay bilaabaan inay soo baxaan. Si tartiib tartiib ah illaa iyo Mayna horumar ayaa laga helayaa meel kasta oo dalka ka mid ah. Maaddaama ay marka hore ka soo muuqan doonaan aagga koonfureed waxyarna ay u kici doonaan woqooyiga, taas oo noqon doonta tii ugu dambaysay ee lagu arko bandhigga. In kasta oo aagga had iyo jeer qaadku yahay jasiiradda okinawa, ilaa bilowga Maarso waxaad yeelan doontaa ubaxyo cherry ah. Si ka duwan Hokkaido, oo noqon doonta meesha kale ee laga soo horjeedo, tan iyo ilaa bilowgii May may u dabaaldegi doonin dhaqankan. Mararka qaarkood waxaan la yaabnaa in la arki karo ubax xitaa dhamaadka bisha Janaayo, in kastoo aysan badanaa ahayn kuwa ugu badan.
Meelo dhaqameed lagu xuso Hanami
In kasta oo geedahaasi horeyba u qabsadeen geesoodyo badan oo dalka ah, had iyo jeer waxaa jira goobo badan oo la booqdo. Qaar ka mid ah ayaa ah Beerta Ueno ee Tokyo ama Kyoto ee Heian Shrine ama Kamogawa. Intii lagu jiray Osaka barta muhiimka ah waxay ku taal Castle Park iyo Nara, sidoo kale beerta magaceeda lagu xardho. Dhinaca kale, Hokkaido waxaan ku leenahay Goryokaku Castle Park iyo Okinawa, Nakijin Castle.
Dabcan, maanta xisbigu wuxuu isu keenayaa qof walba jardiinooyin kala geddisan ama buuro iyo aagag aad ka heli karto geedka cherry-ka ah, ee gees walba ku yaal. In ka badan dhaqan, waxay noqotay xaflad weyn oo ay inta badan ku kulmaan inay wax cunaan oo wax cabbaan illaa ay qorraxdu dhacdo. Marka hadda way ka dabaaldeg badan tahay fekerka. Sidaas oo ay tahay, qof kastaa wuxuu u dabaaldegaa inuu ku hareeraysan yahay jawi u gaar ah, kaas oo ku daboolan khamiis qurux badan oo ay ka buuxaan caadooyin iyo waliba halyeeyo. Ilaa iyo inta ay dhaafayso, geedahaasi waxay ahaan doonaan kuwo muqaddas ah.
Sidaa darteed, waa inaad tagtaa mid ka mid ah meelahaas, u xafido booskaaga si aad ugu raaxeysan karto jardiinooyinka, ku raaxeysan karaan galab ama maalinta oo dhan. Khibraddu waa mid gaar ah oo nasasho leh. Mararka qaar waad ka bixi kartaa magaalada oo waxaad ku raaxeysan kartaa dabeecado badan ama hareeraha webiga. Noqo sida ay doonto ha noqotee, waxa ugu muhiimsan waa inaad ku noolaato ugu yaraan hal mar noloshaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Hanami
Beerta Qaranka Timanfaya